Kudedelwe abasolwa ngodlame | Isolezwe
Kudedelwe abasolwa ngodlame
Isolezwe / 5 March 2013, 10:45am / SIMPHIWE NGUBANE
AMAPHOYISA athi sizinzile isimo ehostela laKwaMashu. Izolo inkantolo idedele amadoda ayisithupha abethweswe amacala okubulala ngenxa yokushoda kobufakazi. Isithombe: DOCTOR NGCOBO
INKANTOLO yeMantshi yaseNtuzuma izolo ihoxise okwesikhashana amacala okubulala kwabesilisa abayisithupha abathinteka ezigamekweni ezihlukene zokubulala ehostela eligubuzelwe wudlame lwezepolitiki KwaMashu. Abanye abasolwa abayisithupha abatholwa nezibhamu eziyisithupha ngeledlule okusolwa ukuthi zazisetshenziswa kuhlaselwa abantu kuleli hostela basagcinwe ngaphakathi bazoze babuyele enkantolo ngoMashi 7.
Bangu-12 sebebonke abantu ababoshwa ngoLwesine ebusuku ngamacala odlame ehostela KwaMashu. Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal uCaptain Thulani Zwane uthe abasolwa abebeboshelwe amacala okubulala badedelwe ngenxa yokushoda kobufakazi.
“Abatholwe nezibhamu bazogcinwa ezitokisini baze bavele enkantolo ngoLwesine. Amaphoyisa ayaqhubeka nophenyo ngamacala abhekene nabasolwa abatholwe nezibhamu,” kusho uZwane.
Ngesikhathi amaphoyisa ebopha la madoda ngoLwesine adalula ukuthi abanye babasolwa bayathinteka esigamekweni sokulalelwa unyendle kwekhansela leNkatha ehostela uMnuz Sakhi Ngcamu.
UNgcamu usehlaselwe kabili ezigamekweni ezehlukene ezenzeke esikhathini esiyizinsuku ezintathu yiqulu lamadoda ayemdubula wasinda. Esigamekweni sokuhlasela esenzeke ngoLwesibili oludlule kwashona indoda eyayizofuna incwadi yekhansela kuNgcamu kwalimala nenye eyadubuleka ekhanda.
Lezi zigameko zafaka amanzi emadolweni kubantu nasezihlotsheni zikaNgcamu ezinye zabaleka ehostela ngemuva kwalokhu kudubula.
UNgqongqoshe woMnyango wezokuThutha, ukuPhepha nokuXhumana koMphakathi uMnuz Willies Mchunu wavakashela kuleya ndawo ngeledlule ezokhuluma nabaholi bamaqembu ezepolitiki ngenhloso yokubhula umlilo owawusu-bhebhetheka.